नायक बनेर फकिर्यो क्रोएसियाली टिम, यसरी भयो भव्य स्वागत [फाेटाेफिचर] - Everest Dainik - News from Nepal
नायक बनेर फकिर्यो क्रोएसियाली टिम, यसरी भयो भव्य स्वागत [फाेटाेफिचर]
एजेन्सी । क्रोएसियाले रुसमा सम्पन्न २१औं संस्करणको विश्वपक जित्न नसके पनि लाखौं समर्थकको मन जित्यो । उसले उपाधि हासिल गर्न नसके पनि ऐतिहासिक सफलता भने अवश्य पाएको थियो । पहिलो पटक उपाधि नजिक पुग्नु नै रुसका लागि ठूलो सफलता थियो ।
याे पनि पढ्नुस नकआउट चरणमा अर्जेन्टिना र क्रोएसियाका प्रतिद्वन्द्वी को ?
उपविजेता बनेर घर फर्किएको क्रोएसियाली टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको छ । टोलीको राजधानी जाग्रेबमा भव्य स्वागत भएको छ । कप्तान लुका मोड्रिक र टिमका खेलाडी तथा प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिक राष्ट्रिय नायकका रुपमा घर फर्किएका हुन् ।
लुका प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेर गोल्डेन बल जित्ने कप्तान हुन् । फाइनल हेर्न मस्को पुगेकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राबार–किटारोविचको स्नेह र माया पाएका क्रोएसियाली खेलाडीहरुले घर फर्किँदा हजारौँ समर्थकको साथ पाए । उनीहरुको स्वागतका लागि ४५ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको देशका साढे दुईलाख मानिस पुगेका थिए । उपाधि जित्न नसके पनि क्रोएसियाली टिमले आफ्ना नागरिकबाट यसरी भव्य स्वागत पायो-
याे पनि पढ्नुस २० बर्षपछि क्रोएसियाको भाग्य चम्क्यो, डेनमार्कको यात्रामा पूर्णविराम !
ट्याग्स: Cortia, क्रोएसिया